7/31/2017 06:57:00 PM
Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Qaar ka mid ah 65% ee Kanada nooc ka mid ah caymiska caafimaadka gaarka ah ee dheeriga ah; badan oo iyaga ka mid ah ay u helaan iyada oo loo shaqeeyaha. adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay aan lacag by account xukuumadda muddo ku dhow 30 boqolkiiba ee wadarta kharashka daryeelka caafimaadka. In 2005, Maxkamadda Sare ee Canada u talin jiray, ee Chaoulli Quebec v., In mamnuucidda gobolka ee caymiska gaarka ah ee daryeelka caafimaadka horay caymis qorshaha gobolka xad Charter Quebec ee Xuquuqaha iyo Xoriyadaha, iyo gaar ahaan qeybaha la xaq u qabashada nolosha iyo ammaanka, haddii ay jiraan aqbali karin ahaayeen sugitaan dheer si loogu soo daweeyo, sida lagu eedeeyay ay dhacdo in this. talada haya ayaa ah hannaanka guud ee caymiska caafimaadka ee guud ahaan Kanada uusan waxba iska badalin, laakiin waxa uu ku dhiiriyay on isku day si wax looga qabto arrimaha ugu muhiimsan ee sahayda iyo baahida iyo saameynta ay wakhtiga sugitaanka. Nidaamka qaran ee caymiska caafimaadka waxaa lagu oogi 1945, ka dib markii dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa ay ahayd tanaasul ah oo u dhexeeya wakiilada Gaullist iyo shuuciga ee baarlamaanka Faransiis. Gaullists Conservative ayaa ka soo horjeeda nidaamka caafimaadka dawladdu maamusho ah, halka Communists waxay ahaayeen taageerayo qaramayn dhamaystiran oo daryeel caafimaad oo ay weheliyaan a model British Beveridge.
Barnaamijka The keentay waa xirfad ku salaysan, dadka oo dhan shaqeeyaan waxaa looga baahan yahay in ay bixiyaan qayb ka mid ah dakhliga si fund aan-faa'iido-doon caymiska caafimaadka, taas oo mutualisms qatarta cudurada, kaas oo bixisaa kharashyada caafimaadka ee heerarka kala duwan. Carruurta iyo Haween ka mid ah dadka caynsan ayaa u qalma faa'iidooyinka, iyo sidoo kale. fund walba wuxuu xor si ay u maareeyaan ay miisaaniyad u gaar ah, oo loo isticmaalo in lagu soo celiyo kharashka caafimaadka heerka arkeen taam, si kastaba ha ahaatee ka dib markii qaar ka mid ah dib u habaynta sannadihii la soo dhaafay, inta badan lacagaha ay bixiyaan isla heerka magdhawga iyo faa'iidooyinka. Dowladda waxay leedahay laba waajibaadka ee nidaamka this. The mas'uuliyadda dawladda koowaad waa qamaar ee heerka ay kharashyada caafimaadka waa in la wada xaajooday, iyo waxa aanu si laba siyaabood: Wasaaradda Caafimaadka si toos ah wadaxaajoodka qiimaha daawada la farsameeya, ku salaysan celceliska qiimaha sale arkay in dalalka deriska ah . guddiga ka mid ah dhakhaatiirta iyo khubaro go'aansado haddii daawada bixisaa lacagta qiimo leh oo ku filan caafimaad si loo celin (la soco in daawada ugu waa soo celin, oo ay ku jiraan homeopathy). Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah
Label: AsuransiKesehatan AsuransiMurah AsuransiTerbaik